Indhaha ayay ku beeshay Kashmir, balse ma aysan rajo beelin. – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Indhaha ayay ku beeshay Kashmir, balse ma aysan rajo beelin.
Magaceedu waa Insha Mustaq, waa 16 jir, waxa ay waligeed ku riyoon jirtay in ay barato dawada, balse waxa ay riyadaas ka quusataymarkii uu indhaha tiray rasaasta cinjirka ah oo ay rideen ciidammada Hindiya ee halkaas ka taliya.
“Waa waqtigii iigu farxadda badnaa muddo dheer kadib” ayay tiri Mustaq , halka aabaheed uu shegay in waxa dhacay ay yihiin mucjiso rabbaani ah.
Iyada oo rog rogaysa baalalka buugaagteeda, indhaheeduna ay illin ka qubanayso ayay BBC-da u sheegtay “Hadda waan dareemi karaa oo kaliya, balse ma arki karo”.
Bishii November, 2017-kii ayay gashay imtixaamkeeda, dowladda waxa ay usoo xushay ardayad taas oo kor ugu akhrinaysa su’aalaha, kadibna qoreysa jawaabaha ay Mushtaaq bixiso.
Marka la is barbar dhigo maadooyinka muusiga iyo xisaabta, waxa ay iyadu jeceshahay xisaabta, balse waxa ay garwaaqsaday in indha la’aanta darteed ay xisaabta ku adkaan doonto, sidaas darteed waxa ay xulatay muusigga oo ka fudud.
← Madaxweyne Farmaajo miyuu u bareeray halista Galgala?.
Shirkii Golaha Wasiiradda Somaliland oo maanta lagaga dooday dagaaladii ka dhacay Tuko-Raq. →